Global Voices teny Malagasy · 14 Febroary 2019
14 Febroary 2019
Tantara tamin'ny 14 Febroary 2019
Shina: Nanjavona tao amin'ny fikarohana Google sy Yahoo ny Grass Mud Horse
Shina14 Febroary 2019
Roa andro lasa izay, nisy fanambarana nozaraina tamin'ireo mpitantana sehatra fifanakalozan-kevitra antserasera, mangataka azy ireo mba tsy hanohy ny Grass Mud Horse Hyperbole. Ny tatitra farany avy amin'ny bilaogy GFW dia hoe nanjavona tao amin'ny milina fikarohana Google sy Yahoo ao Shina ny teny hoe "Grass Mud Horse".
Azerbaijan: Bilaogera, mpanoratra ato amin'ny Global Voices voalaza fa voatazona ao Baku
Mediam-bahoaka14 Febroary 2019
Voalaza fa notazonina tao Baku ny bilaogeran'ny Frontline Club sady mpanoratra ato amin'ny Global Voices Online Ali S. Novruzov satria manomana fihetsiketsehan'ny tanora ny renivohitra Azerbaijaniana.
Hafanam-po14 Febroary 2019
Tamin'ny fangatahana fanampiana ny Global Voices Advocacy hahazo 3000 dolara! Loka hanampy antsika hanohy hanentana mikasika ny fanafihana ny fahalalaham-pitenenana antserasera, ary hizara fitaovana sy tetikady miaraka amin'ireo mpikatroka sy bilaogera miatrika sivana any amin'ny faritra samihafa manerantany.